Tambo dzekuruma imbwa: mhando dzakanakisa uye matipi | Imbwa dzeNyika
Tambo dzembwa dzekuruma ndeimwe yematoyi anozivikanwa ekurovedza muviri imbwa yako uku achiwedzera chivimbo chake uye achivandudza ukama hwako naye. Mukuwedzera, une zvakawanda zvingasarudzwa zvekusarudza iyo yaunoda zvakanyanya.
Tevere, isu hatizongoona tambo dzekuti imbwa dzikurume dziripo paAmazon dzawainyanya kufarira, asi isu tichakupawo matipi ekuashandisa., pamwe chete nezano, uye tichaona ngozi idzo matoyi aya anogona kuunza kana akashandiswa pasina kutarisirwa. Uye kana iwe wakasara uchida zvimwe, tinokurudzira ichi chimwe chinyorwa nezve best imbwa matoyi.
Nobility - Tambo ye ...
BPS Knot Cotton Toy...
Nobility Wind Up Toy...
Docatgo Boka reMatoyi ...
1 tambo yakanakisa yembwa yekutsenga
1.1 XXL tambo ine mipendero
1.2 Chitoyi chine bhora-tipped wind-up toy
1.3 Wind-up toys pack
1.4 Tambo dzekuti imbwa dzirumwe dzemhando dzakasiyana
1.5 Rongedzera imbwa diki
1.6 Tambo 6 dzekuruma nembwa
1.7 tambo yedonje yekuruma
2 Tambo dzembwa dzakachengeteka here kurumwa?
3 Mabhenefiti ekutamba tug-of-war nembwa yako
4 Matambiro ekutamba nembwa yako
5 Kwaunotenga tambo dzembwa dzekuruma
tambo yakanakisa yembwa yekutsenga
XXL tambo ine mipendero
Kana chauri kutsvaga iri tambo yekuruma inoshingirira sezvinobvira, uyu ndiwo muenzaniso wako. Haisi iyo XXL chete (inoda kusvika mita kureba, 91 cm) asi ine mafundo makuru kwazvo uye anoramba. Muchokwadi, mamwe mazwi anoratidza kuti maLabradors avo anorema kupfuura 20 kilos anofara netambo nekuda kwekupokana kwayo. Uyezve, inogadzirwa nekotoni.
Se poindi inopesana, vamwe vashandisi vanoratidza kuti zvimwe zvikamu zvetambo fray zviri nyore, saka zvakakosha kuti ushandise toyi pasi pekutarisa kwako.
Chitoyi chine bhora-tipped wind-up toy
TRIXIE Tamba Tambo...
Trixie inotungamira yekuGerman mhando yezvigadzirwa zvezvipfuyo zvakagadzira chitoyi chemhepo chine kumonyorora kunonakidza: bhora rerabha kumagumo. Mitambo yekukweva tambo ichanyanya kunakidza uye kunakidza nechitoyi ichi chinozovewo nebasa rekuchenesa mazino echipfuwo chako, uku uchikwiza mazino ake nekunakirwa kwemint kana achitsenga purasitiki yebhora. Zvisinei, chitoyi chacho chinogona kunge chisina kusimba kumbwa huru dzerudzi.
Wind-up toys pack
Docatgo Toys zve...
Imwe sarudzo yatinogona kuwana paAmazon ndeye mapaketi anosanganisira matoyi akasiyana ezvipfuyo zvedu, mune iyi kesi, matanhatu akasiyana etambo matoyi. Iwo madiki (akareba masendimita makumi mana), ndicho chikonzero anokurudzirwa kune imbwa dzemhando diki kana dzepakati. Izvo zvakagadzirwa nenylon uye, kuwedzera, iwe unogona kuzvishambidza nemaoko kana mumushini wekugeza. Vanouyawo nebhegi rinoshanda kuti usarase.
Tambo dzekuti imbwa dzirumwe dzemhando dzakasiyana
Iyi tambo inoshanda yekuruma inowanikwa muhukuru hwakasiyana saka iwe unogona kusarudza iyo inonyatsoenderana nembwa yako. Saka, kana yakakura uye yakakasharara, sarudza tambo hombe uye isingachinji, nepo idiki, chiyero M chinofanira kukwana. Tambo yacho yakagadzirwa nedonje, ine dhizaini yakanaka kwazvo uye inobatsira kuchengeta mazino embwa yako akachena. Kunyangwe chiri chigadzirwa chinomira pachena pakuramba kwayo, haufanirwe kurega chipfuyo chako chichitamba nacho chega kuti chisamedze chikamu netsaona.
Rongedzera imbwa diki
WeFine Matoyi e ...
Matambo ematoyi ari mupakiti iyi akasiyana zvakanyanya, sezvo paine gumi akasiyanaSemuyenzaniso, kune matoyi etambo emhando yepamusoro, dhisiki rine rimu rakagadzirwa nechinhu ichi, mhuka mbiri dzakaputirwa dzakagadzirwa netambo uye kunyange akati wandei ematoyi erabha ayo imbwa inogona kuchenesa mazino ayo nawo. Nekudaro, iri diki, paki iyi inonyanya kunangwa kune imbwa diki nepakati, sezvo hombe dzaisazogara zvachose.
Tambo 6 dzekuruma nembwa
FONPOO Toys e...
Asi kana iwe chauri kuda iri paki yematoyi emhepo umo mune matoyi chete emhando iyi, zvinogoneka zvakare. Mune izvi iwe unowana 6 mhando dzakasiyana, imwe neimwe ine mapfundo kana bhora retambo munzvimbo dzakasiyana kuitira kuti mutambo wacho uwedzere siyana uye unonakidza. Tambo dzakagadzirwa nenylon nedonje uye dzakagadzirirwa imbwa dzediki kusvika pakati nepakati.
tambo yedonje yekuruma
Trixie Tamba Tambo,...
Uye isu tinopedzisa nechimwe chigadzirwa cheTrixie, panguva ino tambo yedonje ine mutengo usingarohwe (inenge € 7) Inowanikwa muhukuru hwakasiyana uye mavara (grey, pink uye dema). Iine mapfundo makuru matatu kuitira kuti ugone kutamba nemhuka yako, pamwe nekusagadzikana (inorasikirwa nekushomeka mumbwa huru). Mukuwedzera, iwe unogona kuishambidza mumushini wekugeza, haigoni kuva yakasununguka!
Tambo dzembwa dzakachengeteka here kurumwa?
Kunyange zvazvo zvisina kufanana nokumupa bhegi rakazara nemapanga kuti atambe naro, chokwadi ndechokuti zvimwe zvokutambisa zvakagadzirirwa zvipfuwo zvedu zvinogona kuva nengozi, kunyanya kana tikavarega vachitamba navo tisingavatarisiri.
Iyi ndiyo nyaya yetambo dzembwa dzinoruma, izvo dzine ngozi zvikuru kune imbwa dziya dzinofarira kuparadza matoyi adzo, sezvo vane ngozi yekudya zvimedu zvetambo. Kusiyana kana, semuenzaniso, chakamedzwa chaive chidimbu chepurasitiki kana chakaputirwa nemhuka, chimiro chetambo ndicho chinosanganisira njodzi huru: kurebeswa, chikamu chinogona kugara chakavharirwa mudumbu uye imwe magumo inosvika muura. uye inoramba yakadaro kutozosvikira yapa imbwa murombo ronda kana kuti, zvakatoipisisa, inoita mapfundo nezvimwe zvinhu zvinodzivisa ura, mamiriro ezvinhu ane ngozi zvikuru umo imbwa ingada kuvhiyiwa uye kuti pane dzimwe nguva inogona kutoparira. rufu.
Chii chatingaita munyaya idzi? Zvakanzi: kutarisira kuitira kuti imbwa isamedza chero chidimbu chetambo kana kusarudza imwe mhando yechitoyi kana imbwa yako ichinyanya kuda kuparadza zvinhu.
Mabhenefiti ekutamba tug-of-war nembwa yako
Tambo matoyi embwa haasi ane ngozi chete, pane zvinopesana, inogona kubatsira zvakanyanya mune zvimwe zvinhu, zvinogara zvichisanganiswa nekutarisira, Zvakajeka. Kazhinji, mabhenefiti ainounza akafanana neaya emamwe matoyi, semuenzaniso:
Vanobatsira imbwa yako kukudziridza hutano Kuzvivimba
Vanokubatsirawo zviri nani kudzora mafungiro ako
Ukuwo nekutamba naye futi unokudziridza ushamwari hwako nehukama nembwa
Iyo zvakare inzira yakanaka kwazvo yeku kukuchengetedza muviri nepfungwa
Uye pakupedzisira, inzira yakanaka yekuzviita kupisa simba uye kuti imbwa inonzwa kuneta uye kufara
Matambiro ekutamba nembwa yako
Imwe yemitambo inotambwa zvikuru netambo dzembwa dzekutsenga kudhonza tambo. Kuvhiya kwacho kuri nyore kwazvo, sezvo kuri kungoti imbwa yako inoruma panoperera tambo iwe wobata imwe yacho wotamba kuti uone kuti ndiani anodhonza yakasimba kwazvo.
Zvakadaro, mutambo uyo, sezvatakataura, unobatsira imbwa yako kuti iwedzere kuzvivimba, kukudziridza hukama hwayo nemunhu wayo uye kurovedza muviri. Zvisinei, nokuda dzivisa rutivi rune hasha rwemutambo zvinokurudzirwa kuti:
unotanga mutambo, kubvira ipapo imbwa dzinowanzodzora mafungiro adzo zviri nani pane padzinenge dziri idzo dzinotungamirira.
Shandisa tambo nepfundo kune imwe mugumo, sezvo vakakwana pamutambo uyu.
usazvirega uchikunda zvakawanda zvekuti perrete haafunge kuti ndiye shefu.
Kana akakukwesha nemazino ake kana kukuruma usingaiti nemaune; kumutambo pakarepo uye mira maminetsi mashoma kutamba nayo zvakare.
Saizvozvowo, kana akaramba kusunungura tambo, usamurega achienda kana chipfuwo chako chichadudzira kuti chinogona. Kana anyanya kuomesa musoro, mupe zvinonaka usingaregedze tambo kusvika waita kuti atange asiya.
Chero mamiriro ezvinhu, zviri nani kudzivisa kukakavadzana kana imbwa yatova nehasha, sezvo inogona kukutumira zviratidzo zvakasanganiswa.
Kwaunotenga tambo dzembwa dzekuruma
heyi mazana enzvimbo dzaunogona kuwana tambo dzembwa dzekuruma zvose zviri zviviri zvemhuka uye zverudzi rwakanyanya. Pakati pezvinonyanya kuzivikanwa tinowana:
En Amazon, zvakawanda zvakasiyana-siyana zvingasarudzwa uye mienzaniso, hukuru, mavara asiwo unhu, chimwe chinhu chatinofanira kufungisisa kuitira kuti imbwa isamedza chero tambo. Chero zvazvingaitika, mune ino portal iwe uchawana ese anofungidzira mamodheru, kuwedzera kune inokurumidza kutumira.
En mashopu anehunyanzvi kufanana neTiendaAnimal neKiwoko havana chete mhando dzakawanda, asiwo dzemhando yepamusoro. Mukuwedzera, iwe unogona kuenda iwe pachako kuchitoro kuti utarise kuti chigadzirwa chakamira sei.
Pakupedzisira mukati chitoro seCarrefour kana El Corte Inglés iwe uchawanawo rudzi urwu rwetoyi, kunyange kune rumwe rutivi ivo vanonyanya kudhura kupfuura mune mbiri dzapfuura kurudziro.
Tambo dzembwa dzekuruma dzakakura kuvandudza hukama hwako nembwa yako uye zvakare uzviwane muchimiro, kunyangwe iwe uchigara uchifanirwa kuzvishandisa pasi pekutariswa. Tiudze, wakamboedza matoyi aya? Unofungei? Chii chaunofarira chipfuwo chako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Tambo dzekuruma imbwa: mhando dzakanakisa uye matipi